Kutheni iiarhente zokuModareyitha kwi-Instagram zisebenzisa le Nethiwekhi? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 20, 2018 0 IiCententarios 1056
Ngokonyuka kwe-smartphone kunye nokufikelela kwi-Intanethi kwangoko, kuye kwakho ulwando olukhulu kwinani leenkwenkwezi ezivelayo ezifikelela kumanethiwekhi asekuhlaleni. Izixhobo zetekhnoloji ephezulu kunye neearhente zemodeli zisetyenziswa ukukhuthaza i-brand yakho kunye ne-aesthetics yakho, kubabukeli abasamkelayo, abasoloko bekwi-Intanethi. Kodwa kukho iqela elikhulayo leemodeli eziqokelela isabelo sazo esifanelekileyo sesenzo, ngakumbi kwi-Instagram, eyimodeli yabantwana! Kodwa Kutheni i-arhente zemodeli ze-Instagram zigqibe kwelokuba zisebenzise eli jelo?
Kwiimvumi ezinamabhongo njengoLily Allan, izixhobo zentlalo ezinje nge-Instagram, Twitter, kunye ne-Snapchat zibaluleke kakhulu ekwaziseni ngeetalente zabo zemodeli. Izixhobo zokupapasha i-Desktop ezinikezela ngephanyazo, ukufikelela ngexesha lokwenyani kubalandeli kwihlabathi liphela kuncede iinkwenkwezi ezikhulayo ukuba zenze uphawu lwazo, zenze ukuba zibe zezakho kwaye zifikeleleke, kwaye zivelise umkhosi owomeleleyo wabalandeli abakwi-intanethi abarhintyelwe kuko konke ukuhamba.
Kwiqela likaKardashian-Jenner et al, oku kukhokelele ekutsaleni umdla wabo rhoqo ezinxibeni zabo zemihla ngemihla, izimonyo, iinwele kunye nezixhobo. Ngabaphulaphuli abazibophelele ngokupheleleyo kwinkwenkwezi yakutshanje ijongeka kwi-intanethi, kulula ukwenza imali ubukho bakho kwimidiya yoluntu ngokwenza izithembiso kunye nezivumelwano zenkxaso.. Kungenxa yoko le nto iiarhente zemodeli kwi-Instagram ziyazi ngeenkwenkwezi ezintsha. Ukongeza, ezona ntengiso zibalaseleyo zefashoni ziyavuma ukunxiba iinkwenkwezi zonxibelelwano lwasentlalweni, zikhuthaza iimveliso zazo kubalandeli abanqwenela ukulingisa iindlela zakutshanje, rhoqo kwanangaphambi kokuba zibambe i-catwalk.
Ngale ndlela yokuzama kunye nokuvavanywa, ukuphumelela iimvumelwano ezingamashumi amabini zemodeli kunye nezindlu zefashoni kunye nokufumana iintloko kwimithombo yeendaba kwihlabathi lonke, elinye iqela leemodeli ezinqwenelekayo lingena kwinqwelo yeendaba zentlalo, uninzi ngaphambi kokuba enobuchule bezithuthi ukuyenza.
Umkhwa wakutshanje wonxibelelwano lwentlalo kukunyuka kwe-instamom, ii-moms ezizilumkisayo zonxibelelwano lwentlalo, Sebenzisa i-Instagram ukwandisa iiprofayile zabantwana bakho kunye nokufumana imisebenzi yokumodareyitha. Ukuza kuthi ga ngoku kubonakala ngathi kuyasebenza.
Ngeemodeli zabantwana abaphumelele kakhulu ze-Instagram, ezinje ngeminyaka ye-4 yeLondon Scout enabalandeli abangaphezu kwe-105,000 kunye no-Alonso Mateo onomfanekiso omangalisayo wabalandeli be-600,000, ii-haute couture brand zenza konke okusemandleni ukwenza ezi modeli zincinci zokumisela imeko Veza imigca yakho yokugqibela. Ngapha koko, uAlonso omncinci usandokuya kwiVeki yakhe yokuqala yeFashoni eParis, esenza iintloko kwiDior show. Kuyaqondwa ke ukuba kutheni iiarhente zemodeli kwi-Instagram zisebenzisa le nethiwekhi yoluntu.
Yintoni enyanzela aba bazali ukuba bazinyamekele ngononophelo ezi foto kubaphulaphuli behlabathi liphela? Kungokwemvelo ukuba abazali bathathe izifinyezo zosapho rhoqo, xa bekhula, kodwa ezi ziqhushululu kwinqanaba, kunye neefoto zoochwephesha, ukukhanya kunye namabali empahla akhethe ngononophelo, abeke umntwana wakhe kwindawo ebonakalayo. Ngayiphi injongo?
Ukongeza ekutsaleni umdla wokuqala wee-arhente zokumodareyitha kwi-Instagram, uninzi lwabazali likolu ncedo lwezibonelelo, kunye nomzi-mveliso wefashoni kunye neivenkile ezikwi-Intanethi ezibonelela ngemigca yazo yamva yasimahla simahla xa ufuna ibhekhaphu ekondweni. I-Instagram ixakekile. U-Keira Cannon, umama kaPrinceton weminyaka ye-5, abalandeli bakhe be-Instagram bafikelele phantse kubasebenzisi be-7,000, bacaphule izaphulelo zokuthenga, iisampuli zoyilo lwakutshanje kunye namaxabiso emali kwiseshoni nganye.
Utata kaPrinceton, uSai Roberts, ulumke ngakumbi. Uthi: “Kukho izinto ezixhalabisayo ukuba ingaphuma esandleni, kodwa ukuza kuthi ga ngoku ibe ngamava amnandi. Ndinebhongo kakhulu ngokuba uyazibonakalisa, kwaye ndiyathemba ukuba uyakwazi ukukusebenzisa kwisimbo sakhe sokuyila nelizwi lakhe njengokuba ekhula.
Ngelixa abalandeli bokutya kwabantwana kwi-Instagram ikakhulu kulungile kwaye kuyakhuthaza, kukho amazwi athetha phandle malunga neengozi ezinokubakho zokuveza ulutsha kuhlolisiso olunzulu kunye nemigangatho ephezulu yobuhle esemncinci.
Uninzi luthi oku kuqhambuka kucekisa abantwana kwaye kudala ukuqinisekiswa kwexesha elide kubantu abancinci abanokuba nobunzima bokuqonda ukuba kutheni babhiyozelwa kuphela ngenxa yenkangeleko yabo. Abanye ootishala bathelekisa ii-instamoms ezibonisa abantwana babo kwihlabathi ledijithali ukumela omama abaqhelekileyo abanxulunyaniswa nabephepha lobuhle.
UGinger Clark, ugqirha wengqondo kunye nonjingalwazi kwimfundo yezonyango kwiYunivesithi yase-Southern California, malunga nomzekelo wokumodelwa kwabantwana: Into exabisekileyo emehlweni akho, utshilo. “Kufuneka ulumke kakhulu ukuze uqiniseke ukuba imiyalezo oyinika umntwana wakho yile 'Kuyonwabisa, oku kuyanxiba.' Kodwa xa uqesha umfoti wakho kunye ne-arhente yokumodareyitha, iya kuba nentengiso ngakumbi. "
Iiakhawunti ezininzi zikhetha Thenga abalandeli be-Instagram ukwandisa ubunzima babo ekuhlaleni kwaye ngale ndlela iimveliso ezingakumbi zinxibelelana nabo.
I-6tag Instagram yeWindows yeWindows